Mayelana Ukrainian Ukwamukelwa Center - Isifundo e-Ukraine
Admission.Center igcwele umhlaba wonke yenhlangano yomhlaba wonke esiza abafundi foreing nge yokuvuma futhi sitadisha phesheya.
Admission.Center kwenza abafundi international ukuphila kakhulu zokunethezeka nenjabulo.
Sizokusiza ukukhetha inyuvesi. Thina isiqiniseko yokuvuma yakho. Thina isiqiniseko umfundi visa ngawe.
Ukrainian Ukwamukelwa Center kuyinto officialy registred futhi kuvunywe eMnyango Wezemfundo, Isayensi Youth kanye nemidlalo ye-Ukraine.
Ukrainian Ukwamukelwa Center kusiza izinqubo isicelo umfundi, visa, yokuhlala, lithathelwe nolwazi lokufunda 100% ngesiNgisi ulimi izifundo, Russia noma Ukraine njengoba olunye ulimi.
Ukrainian Ukwamukelwa Center ingakusiza ukuba ukhethe eyunivesithi engcono Yiqiniso ngokukhethekile ngawe. Sizokwenza buzana you semfundo, inqubo yokwemukelwa, ukufundisa Imali, ukuphila edolobheni enyuvesi and eziningi nezinye izinto ewusizo.
Ukrainian Ukwamukelwa Center isiza abafundi nge incwadi isimemo nokuthola visa. Zonke abafundi, ukuthi yokuvuma ukwakheka nge-Ukrainian Ukwamukelwa Centre uyohlale uthole i-visa.
Ukrainian Ukwamukelwa Center kusiza abafundi undergraduate kanye kokuphothula.
Isicelo nge Ukrainian Ukwamukelwa Center kunezinzuzo:
I aphansi ukufundisa Imali eYurophu
yokulala eshibhile kakhulu
Eshibhile izindleko zokuphilisa futhi eziningi amacebiso awusizo ngayo
Eshibhile futhi isiqinisekiso Visa
Ezemfundo emayunivesithi European
Ukrainian Ukwamukelwa Center uyonihola ngokusebenzisa zonke izinyathelo okudingeka uzithathe ukuze ukufunda futhi uthole imfundo e-Ukraine ngenduduzo.